#Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u amba baxay Masar - Get Latest News From Horn of Africa
By WARIYAHA CAALAMKA On Apr 22, 2019
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u amba-baxay Masar, halkaas oo uu ka furmayo shir deg-deg ah oo ay yeelanayaan Madaxda Midowga Afrika.
Shirkaasi ayaa lagaga arrinsanayaa xaaladda kacsan ee dalka Suudaan iyo sidii xal waara looga gaari lahaa qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira wadankaasi Carbeed.
“Dowladda Soomaaliya oo xusuusan hiilkii iyo garab istaaggii Dowladda iyo shacabka Suudaan ay u galeen walaalahooda Soomaaliya, xilliyadii adkaa, ayaa mudnaanta siinaysa ka qeyb qaadashada dadaallada heer gobol iyo heer qaaradeed ee ku aaddan samata bixinta dalka Suudaan,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Madaxtooyada.
Suudaan ayaa dhexda ka gashay jahwareer siyaasadeed kadib markii la afgambiyey dowladii Cumar Al Bashiir, isla markaana ay talada wadanka la waregeen ciidanka.
Socdaalka Farmaajo ayaa imaanaya iyada oo ay guuldareysteen wadahadalo u dhaxeeyay dhinacyada ku lugta siyaasada Suudaan oo la doonayo in xiisada lagu qaboojiyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa horey digniin amni ugu dirtay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool Suudan, kuwaasi oo isugu jira ganacsato, arday iyo dad kale.